Wira Thu admits that he is terrorist | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သစ္စာနီ မီးလောင်ရာ လေပင့်တာလား
Burmese song for Bama Buddhist Thein Sein Government and Wira Thu bin Laden »
ငါ့တရားတွေက မင်းပြောသလို အမုန်းတရားတွေနဲ့ တောက်လောင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းရဲ့ရေးသားချက်တွေကမှ အမုန်းတရားတွေ ပြည့်နှက်နေခဲ့တာပါ။
ကောက်ချက်ချလွဲမှားတာ၊ နားလည်မှုလွဲမှားတာတွေကို ခွင့်လွတ်လို့ ရတယ်နော်။ ငါ့ကိုပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေမှန်း မင်းစကားလုံးတွေက သက်သေပြနေတယ်ဆိုတာ မင်း ငြင်းဦးမှာလား မိန်းကလေး။
မင်းပြောတဲ့စကားနှင့် ငါဟောတဲ့တရားတွေကို အသေအချာပြန်ပြီး တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါဦး။
Now is not the time for calm.
Now is the time to rise up to make your blood boil. (အဲ့ဒါ မင်းစကား)။
၉၆၉ ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်
ရိုးသား၊ နိုးကြား၊ ကြိုးစားလေ။
ဒါကိုကြည့်ရင် မင်းကိုယ်တိုင်က တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ငါ့ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက်ခိုက်နေတာ ပေါ်လွင်တယ်နော်။
ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်တုန့်ပြန်တာတွေ မလုပ်ဖို့ ဟောကြားနေတဲ့ ငါ့ကို မင်းကအကြမ်းဖက် သမားလို့ စွပ်စွဲခဲ့တယ်။
ရိုးသားဖို့၊ နိုးကြားဖို့၊ ကြိုးစားဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ ငါ့ကို မင်းက ထချဖို့၊ စတိုက်ဖို့၊ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်တဲ့ပုံစံမျိုး ချိုးသွားခဲ့ပြန်တယ်။
ငါက သွေးမအေးစေနဲ့ သွေးနွေးစေကြဖို့ ဟောတာကို မင်းက သွေးဆူသွေးပွက်အောင် လုပ်ခိုင်းတဲ့ ရန်တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်သွားခဲ့ပြန်တယ်။
တတ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးပဲနော်။
25.6.2013- PM- 11:37
If wish to read all read here>>>
“Ms. Hannah Beech (TIME Magazine) သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ”
by Wira Thu (Notes) on Wednesday, June 26, 2013 at 2:41am
ခင်မင်ရပါသော နှမတော် ဟန်နာဘိခ်ထံ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဦးပဉ္စင်း ဦးဝီရသူ စာရေးလိုက်ပါတယ်။
မင်း ငါ့ဆီလာစဉ်တုန်းက မင်းနှင့် မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာအပေါ် ငါတို့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန် ခဲ့တယ်နော်။ မင်းတို့ဖြစ်စေချင်တာအားလုံးကို ငါအကုန် ကူညီခဲ့တယ် ဆိုတာလည်း မင်းသိမှာပါ။
မင်းတို့သတင်းသမားတွေ သတင်းမှန်သိစေချင်တဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်း တစ်ခုတည်းနဲ့ ငါတို့ မင်းကိုကူညီခဲ့ကြတာပါ။
မင်းတို့နိုင်ငံကြီးသားတွေကို လေးစားလို့ မင်းတို့ TIME ဌာနကြီးကို အထင်ကြီးလို့၊ မင်းတို့ လိမ်လိမ့်မယ် မထင်လို့၊ သတင်းသမားကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်လိမ့်မယ် မထင်လို့ ငါတို့ မင်းကို ကူညီခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုမှ မင်းဟာ ငါ့အတွက် ဧည့်ဆိုးမှန်း သိလိုက်ရပါတယ်။
မင်းမျက်နှာပေါ်က လှပတဲ့အပြုံးရဲ့နောက်ကွယ်က အမုန်းတရားတွေကို မြင်အောင် ငါမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ နူးညံ့တဲ့ မင်းရဲ့အမူအရာတွေအောက်က အကြင်နာတရားကင်းမဲ့မှုတွေကို မြင်အောင်ငါမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ချိုသာတဲ့စကားတွေထဲက ဓားသွားလိုရက်စက်မှုတွေကိုလည်း မြင်အောင် ငါမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး။
မင်းလို နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ချောမောလှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ရက်စက်ရဲလောက်တဲ့ အာဃာတနှလုံးသားမျိုး ရှိလိမ့်မယ်လို့ ငါမထင်ခဲ့တာဟာ မင်းပြောသလို ငါဟာ အခြေအနေမဲ့ ဘဝကလာတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါး ဖြစ်နေလို့ပဲ ယူဆရပါတော့မယ်။
ဗမာဘင်လာဒင်တို့၊ နာဇီလက်သစ်တို့၊ နာဇီကတုံးတို့၊ မြန်မာ အိုစမာတို့ဟာ facebook မှာ ကုလားတွေပေးထားတဲ့ နာမည်တွေပါလို့ မင်းကို ငါပြောခဲ့ရဲ့သားနဲ့ မင်းက The Buddhist Monk, The Title “Burmese Binladen” လို့ သုံးရက်တယ်နော်။
ရှေ့မှာတုန်းက The Buddhist Monk လို့ သုံးထားပြီးမှ With the man in burgundy robes လို့ တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သုံးထားတာကို တွေ့ရပြန်တော့ မင်းကိုယ်မင်း မင်းဘဝရဲ့သရုပ်မှန်ကို ဝန်ခံလိုက်တာလို့ပဲ အောက်မေ့မိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မင်းဟာ ငါထင်ထားသလို လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘဲ အစွန်းရောက်ကုလားတွေနဲ့ တစ်တန်းစားတည်း ဖြစ်နေလို့ပါ။ ကုလားတွေလည်း ငါ့ကို မင်းလိုဘဲ သင်္ကန်းခဏခဏချွတ်ခိုင်းနေကြလို့ပါ။ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုဘဲ သင်္ကန်းဝတ် လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြလို့ပါ။
Tags: Bhikkhu, Buddhism, Burma, Burmese language, Hannah Beech, Muslim, Time, Wira Thu
This entry was posted on June 27, 2013 at 5:04 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.